ENTERTAINMENT – THE NEWS TODAY
အကယ်ဒမီရုပ်ထုက ကြယ်တွေအခိုးခံရတဲ့အကြောင်း ပြောပြတဲ့ရန်အောင်
အကယ်ဒမီများရှင်မင်းသားချောကြီးရန်အောင်ကိုတေ့ာပရိသတ်များအားလုံးလည်းရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်သလိုပရိသတ်တော်တော်များများလည်းလက်ခံတဲ့မင်းသားတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်အောင်ကတော့သူရထားတဲ့အကယ်ဒမီရုပ်ထုကကြယ်တွေအခိုးခံရတဲ့အကြောင်း ပြောပြခဲ့ပြီး နောက်ထပ်လည်း အကယ်ဒမီတွေကို လိုချင်ပါသေးတယ် ကြိုးစားသွားပါဦးမယ်လို့ ပြောကြားသွား ခဲ့ပါတယ်။
MC7နဲ့ အင်တာဗျူးမှာတော့ ရန်အောင်က “ကြယ်တွေကတော့ ခိုးယူချင်လို့ လာခိုးသွားတာပေါ့ဗျာ။ တခုကို ၁ ကျပ်သားရှိတယ်ဆိုတာ သိလို့ သော့ခတ်ထားတာကို အဲ့လိုပဲ ဖွင့်ပြီးတော့ ခိုးသွားတာပေါ့။ ကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာကတော့ တော်တော်ကိုဒေါသထွက်တယ်။ ကိုယ်တန်ဖိုးထားတဲ့ပစ္စည်းကိုယ်တောင်မထိရက်လို့သော့ခတ်ထားတာ။
တချို့ဆိုချက်ချင်းကိုကြယ်ကိုဖြုတ်ပြီးလှဲလိုက်တယ်လေ။သူများတွေလည်းပြောပါတယ်။ဖြုတ်ပြီးတော့လှဲလိုက်ပါဆိုပြီးတော့။ရွှေရေစိမ်ထားတဲ့ကြယ်တခုကိုတပ်ပြီးအဲ့ကြယ်အစစ်ကိုရောင်းရောင်းလှူလှူပေါ့နော်.ကျွန်တော်ကျတော့မဖြုတ်ပဲနဲ့ကိုထားထားတာ။ဒါပေမယ့်လည်း ပြန်ရခဲ့ပါတယ်။ အကုန်ပြန်ရခဲ့ပါတယ်”
“အကယ်ဒမီကတော့လိုချင်တာပေါ့ဗျာ။ကိုယ်ကလည်းသရုပ်ဆောင်ကိုတစိုက်မတ်မတ်နဲ့လုပ်တတ်တဲ့သူတယောက်ဆိုတော့လိုချင်တာပေါ့။ ဒါက ကိုယ့်ရဲ့ အမှတ်တရ မှတ်တိုင်လေးတခုပေါ့။ကျွန်တော့်မှာဆိုလည်းအကယ်ဒမီ၆ဆုရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော့်ဘဝမှတ်တိုင်တခု အဖြစ် ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။
နောင်လာနောက်သားတွေမှာလည်းအကယ်ဒမီကဘယ်သူအများဆုံးရထားတာလည်းဆိုတဲ့အချိန်မှာရန်အောင်ကတော့၆ဆုရထားတယ်။ ပြီးတော့ ဇာတ်ဆောင်ဆုတွေပဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပြောလို့ရတာပေါ့။ နောက်ထပ်ဆုတွေလည်း ထပ်ပြီးတော့ လိုချင်ပါသေးတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်တခုကို အသိအမှတ်ပြုပေးတဲ့ဟာလေးပါ”
“ကျွန်တော်တို့လည်းဝါသနာပါလို့သရုပ်ဆောင်လုပ်တယ်။ပြီးတော့ကိုယ့်နာမည်မှာအကယ်ဒမီပါချင်တယ်။အကယ်ဒမီကနေထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီဖြစ်ချင်လာတယ်။အဲ့စိတ်ကြောင့်လည်းအလုပ်အားလုံးကိုတကယ်ကြိုးစားပြီးတေ့ာမှထောင့်စိအောင်ကြိုးစားဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်မှာအကယ်ဒမီတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ပိုကောင်းတာတွေလုပ်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့အကယ်ဒမီတွေအများကြီးရှိရဲ့သားနဲ့မိန်းမလိုဝတ်တဲ့ကားတွေ ဘာလို့ရိုက်တာလဲဆိုတော့ ဒါကတော့ ချွင်းချက်ပေ့ါဗျာ။
လားငှားကြလို့လာပြီးတော့တောင်းဆိုကြလို့ပေါ့ဗျာ။အမှန်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကအဲ့လိုမျိုးမရိုက်ချင်ဘူး။အဲ့လိုရိုက်ရတာအရမ်းပင်ပန်းတယ်။ဒီအဝတ်စားတွေအသုံးဆောင်တွေပြင်ဆင်မှုတွေကကိုယ်ကမလုပ်တတ်ဘူး။ပြီးတော့အကုန်အသစ်ပြန်ဝယ်ရတာလေ။အဲ့လိုလောကမှာ ဘယ်လိုပြောကြ ဆိုကြလဲဆိုတာကိုလည်း လေ့လာရပါသေးတယ်” ဟု ဖြေကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
အကယျဒမီမြားရှငျမငျးသားခြောကွီးရနျအောငျကိုတေ့ာပရိသတျမြားအားလုံးလညျးရငျးနှီးပွီးသားဖွဈသလိုပရိသတျတျောတျောမြားမြားလညျးလကျခံတဲ့မငျးသားတယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။ရနျအောငျကတော့သူရထားတဲ့အကယျဒမီရုပျထုကကွယျတှအေခိုးခံရတဲ့အကွောငျး ပွောပွခဲ့ပွီး နောကျထပျလညျး အကယျဒမီတှကေို လိုခငျြပါသေးတယျ ကွိုးစားသှားပါဦးမယျလို့ ပွောကွားသှား ခဲ့ပါတယျ။
MC7နဲ့ အငျတာဗြူးမှာတော့ ရနျအောငျက “ကွယျတှကေတော့ ခိုးယူခငျြလို့လာခိုးသှားတာပေါ့ဗြာ။တခုကို၁ကပျြသားရှိတယျဆိုတာ သိလို့ သော့ခတျထားတာကို အဲ့လိုပဲ ဖှငျ့ပွီးတော့ ခိုးသှားတာပေါ့။ ကြှနျတျောအဲ့လိုဖွဈသှားတာကတော့ တျောတျောကိုဒေါသထှကျတယျ။ ကိုယျတနျဖိုးထားတဲ့ပစ်စညျးကိုယျတောငျမထိရကျလို့သော့ခတျထားတာ။
တခြို့ဆိုခကျြခငျြးကိုကွယျကိုဖွုတျပွီးလှဲလိုကျတယျလေ။သူမြားတှလေညျးပွောပါတယျ။ဖွုတျပွီးတော့လှဲလိုကျပါဆိုပွီးတော့။ရှရေစေိမျထားတဲ့ကွယျတခုကိုတပျပွီးအဲ့ကွယျအစဈကိုရောငျးရောငျးလှူလှူပေါ့နျော.ကြှနျတျောကတြော့မဖွုတျပဲနဲ့ကိုထားထားတာ။ဒါပမေယျ့လညျး ပွနျရခဲ့ပါတယျ။ အကုနျပွနျရခဲ့ပါတယျ”
“အကယျဒမီကတော့လိုခငျြတာပေါ့ဗြာ။ကိုယျကလညျးသရုပျဆောငျကိုတစိုကျမတျမတျနဲ့လုပျတတျတဲ့သူတယောကျဆိုတော့လိုခငျြတာပေါ့။ဒါကကိုယျ့ရဲ့အမှတျတရမှတျတိုငျလေးတခုပေါ့။ကြှနျတေျာ့မှာဆိုလညျးအကယျဒမီ၆ဆုရှိတယျဆိုတာကိုကြှနျတေျာ့ဘဝမှတျတိုငျတခု အဖွဈ ကြှနျတျောပွောလို့ရတယျ။
နောငျလာနောကျသားတှမှောလညျးအကယျဒမီကဘယျသူအမြားဆုံးရထားတာလညျးဆိုတဲ့အခြိနျမှာရနျအောငျကတော့၆ဆုရထားတယျ။ ပွီးတော့ ဇာတျဆောငျဆုတှပေဲ ဖွဈတယျဆိုတာကို ပွောလို့ရတာပေါ့။ နောကျထပျဆုတှလေညျး ထပျပွီးတော့ လိုခငျြပါသေးတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယျလုပျတဲ့အလုပျတခုကို အသိအမှတျပွုပေးတဲ့ဟာလေးပါ”
“ကြှနျတျောတို့လညျးဝါသနာပါလို့သရုပျဆောငျလုပျတယျ။ပွီးတော့ကိုယျ့နာမညျမှာအကယျဒမီပါခငျြတယျ။အကယျဒမီကနထေပျဆငျ့အကယျဒမီဖွဈခငျြလာတယျ။အဲ့စိတျကွောငျ့လညျးအလုပျအားလုံးကိုတကယျကွိုးစားပွီးတေ့ာမှထောငျ့စိအောငျကွိုးစားဖွဈပါတယျ။ကိုယျ့မှာအကယျဒမီတှအေမြားကွီးရှိတာကွောငျ့ပိုကောငျးတာတှလေုပျဖွဈတယျ။ပွီးတော့အကယျဒမီတှအေမြားကွီးရှိရဲ့သားနဲ့မိနျးမလိုဝတျတဲ့ကားတှေ ဘာလို့ရိုကျတာလဲဆိုတော့ ဒါကတော့ ခြှငျးခကျြပေ့ါဗြာ။
လားငှားကွလို့လာပွီးတော့တောငျးဆိုကွလို့ပေါ့ဗြာ။အမှနျဆိုရငျတော့ကိုယျကအဲ့လိုမြိုးမရိုကျခငျြဘူး။အဲ့လိုရိုကျရတာအရမျးပငျပနျးတယျ။ဒီအဝတျစားတှအေသုံးဆောငျတှပွေငျဆငျမှုတှကေကိုယျကမလုပျတတျဘူး။ပွီးတော့အကုနျအသဈပွနျဝယျရတာလေ။အဲ့လိုလောကမှာ ဘယျလိုပွောကွ ဆိုကွလဲဆိုတာကိုလညျး လလေ့ာရပါသေးတယျ” ဟု ဖွကွေားသှားခဲ့ပါတယျ။
(.တိုက်ပွဲပျော် )တေးရေးနန္ဒအောင်- ဆို တသသ
လောကဓံလှိုင်းတံပိုးများရယ်၊ရိုက်ပုတ်နှိပ်စက်မညှာမတာညှင်းလေတယ်၊ရေနစ်သူဝါးကူထိုးတဲ့ဒီလောကကြီးထဲ၊ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာအားထားရာ ကိုယ်ပဲအဖော်မွန်ကောင်းဖြစ်တယ်၊အားတင်းထားပါ ညီမလေးရယ် အားတင်းထားပါညီမလေးရယ်၊တစ်နေ့တစ်လံပုဂံဘယ်မရွေ့ တဲ့ဆိုရိုးစကားရှိ့ တယ်၊ကိုယ့်ဘဝမှာရီရွယ်ရာဖြစ်ရစေမယ်…..
မမပြောတဲ့စကားတွေ ကြားရတာ နှလုံးသားမှာနွေးလှပါတယ်၊လောကဓံကြုံ မဖြုံပါဘူး အားရှိ့ ပါတယ်၊တက်ကျိုးရင်လက်ထိုးလှော်ပါမယ်
ဆို တသသ စိုးစန္ဒာ
အဲသီချင်းလေးကိုညီမလေးစိုးစန္ဒာနဲ့ဆိုမှာပါရှင့်၊ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးအတွက့်လည်းခွန့်အားဖြစ်စေမယ့်၊သီချင်းကောင်းလေးဖြစ်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်၊ဒီသီချင်းလေးကိုလည်း ကျွန်မဘဝအဖြစ်မှန်နဲ၊့ညီမလေးစိုးစန္စာဘဝရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုပုံဖော်ပြီးရိုက်ကူးသွားမှာပါရှင့်
ညီမရေအမတသသဘဝကလည်းညီမလိုကိုယ့်ကိုကိုယ်၊ဓာက်ဆီလောင်းမီးမရှို့ခဲပေမယ့်၊အပူတွေနဲ့ပါပဲ(ဒီနေ့လည်းထောင်ချောက်မိတော့မလို့ )ဒါပေမယ့် လာစမ်းပါလောကဓံရယ်၊ကျွန်မတို့ ရဲဒုက္ခတွေကိုဒီသီချင်းလေးနဲ့ စိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်(ညီမလေး သီဆိုဘို့သီချင်း ရပြီး)တသသ
Credit: MP4 You
(.တိုကျပှဲပြျော )တေးရေးနန်ဒအောငျ- ဆို တသသ
ဆို တသသ စိုးစန်ဒာ
ညီမရအေမတသသဘဝကလညျးညီမလိုကိုယျ့ကိုကိုယျ၊ဓာကျဆီလောငျးမီးမရှို့ခဲပမေယျ့၊အပူတှနေဲ့ပါပဲ(ဒီနလေ့ညျးထောငျခြောကျမိတော့မလို့)ဒါပမေယျ့ လာစမျးပါလောကဓံရယျ၊ကြှနျမတို့ရဲဒုက်ခတှကေိုဒီသီခငျြးလေးနဲ့စိနျချေါလိုကျပါတယျ(ညီမလေး သီဆိုဘို့သီခငျြး ရပွီး)တသသ
တစ်ယောက် နဲ့တစ်ယောက် အပြန်အလှန်ဆေး ထိုး ခဲ့ကြ တဲ့ ပိုင်တံခွန်နဲ့ အောန်ဆိုင်းတို့ရဲ့ ဗီဒီယို
မော်ဒယ်လောက မှာ အရမ်း ကို အောင်မြင်ကျော်ကြား လူကြိုက်များနေခဲ့ကြရတဲ့ ပိုင်တံခွန်နဲ့ အောန်ဆိုင်းတို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာဆိုရင် အရမ်းကို ခင်ခင်မင်မင် ရင်းရင်းနှီးနှီးရှိပြီး ချစ်ချစ်ခင်ခင် နေတတ်ကြတဲ့ သူလေးတွေပါ။
အရမ်းကို ခင်မင်ကြတဲ့ သူတို့ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်ဟာဆိုရင် ပြောမနာ ဆိုမနာ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်တာကြောင့် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နောက်ပြောင်ပြီး အပြန်အလှန် ဆေးထိုးထားခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းကို စနောက်ထားကြတဲ့ သူတို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးတွေကို ပရိသတ်တွေလည်း အရမ်းကို ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ယောက် နဲ့တစ်ယောက် အပြန်အလှန် ဆေးထိုးပြီး စနောက်ထားခဲ့ကြတဲ့ ပိုင်တံခွန်နဲ့ အောန်ဆိုင်းတို့ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကို ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဘယ်လိုတွေ ဆေးထိုးထားကြလဲဆိုတာ သိရှိရအောင် ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကို ဆက်လက်ပြီး ကြည့်ရှု အားပေးသွားကြပါဦးနော်။
ပိုင်တံခွန်ကနေပြီး အောန်ဆိုင်း ကို ဆေးအကြီးကြီးထိုးထားခဲ့တဲ့ Video
အောန်ဆိုင်းကနေပြီး ပိုင်တံခွန်ကို ပြန်လည်ဆေးထိုးလိုက်တဲ့ Video
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြန်အလှန် ဆေးထိုးထားခဲ့ကြတဲ့ ပိုင်တံခွန်နဲ့ အောန်ဆိုင်းတို့ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ကြည့်ရင်း ပရိသတ်ကြီးလည်း သဘောကျ ကြိုက်နှစ်သက်မိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ မိုမိုလေး ပရိသတ်ကြီးလည်း ပိုင်တံခွန်နဲ့ အောန်ဆိုင်းတို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လို စနောက်ပြီး ဆေးထိုးထားခဲ့တဲ့ ပြောမနာဆိုမနာ သူငယ်ချင်းတွေ ရှိတယ်ဆိုရင် ဒီပို့စ်လေးကို Share ပြီး သူငယ်ချင်းကို mention ခေါ်သွားကြဖို့ မမေ့နဲ့ဦးနော်။credit-molay
မြင့်မြတ်အတွက် “​ဟျောင့်​ ဒုက္ခပါပဲကွာ” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး ရေးပေးခဲ့တဲ့ ဘဝ
The Voice Myanmar Season 1 မှာ သီဆိုယှဉ်ပြိုင်ရင်း ပရိသတ်တွေ သတိထားမိလာခဲ့တဲ့ ဘဝက အခုလက်ရှိမှာလဲ သူကိုယ်တိုင် သီချင်းတွေရေးပြီး သီဆိုနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
The Voice Myanmar မှာ ဘဝသီဆိုခဲ့တဲ့ ဖိုးပြည့်ရဲ့ ကိုယ်စောင့်နတ် သီချင်းကို Raggae ပုံစံနဲ့ သီဆိုခဲ့တာကလဲ ပရိသတ်တွေကြားမှာ တော်တော်ကြီး ရေပန်းစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာ ဘဝက သူအရမ်းကြိုက်တဲ့ Idol ဖြစ်တဲ့ ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယို သရုပ်ဆောင် မြင့်မြတ်အတွက် သူကိုယ်တိုင် သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရေးပြီး သီဆိုပေးခဲ့ပါတယ်။ သီချင်းလေး နာမည်က “ဟျောင့် ဒုက္ခပါပဲကွာ” လို့ အမည်ရပါတယ်။
ဘဝက သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကနေ ကျွန်တော်က ကိုမြင့်​မြတ်​ရဲ့FAN အစစ်​ ဆိုလည်း လုံးဝ ​နောင်​ဘ၀ထိဆိုလည်း မမှားဘူးဗျာ ။သူ သရုပ်​​ဆောင်​တာ​လေးကြည့်​ပြီး ​ကြွေပြီး သီချင်း​ရေးမိခဲ့တယ်​ ကိုမြင့်​မြတ်​​နေရာက​နေ ၀င်​ပြီး နားသာဆင်​ကြည့်​​ပေ​တော့ဗျာ” ဆိုပြာပြောထားပါတယ်။
ဘဝရေးဆိုတီးထားတဲ့ “ဟျောင့် ဒုက္ခပါပဲကွာ” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို ခံစားနားဆင်ပေးကြပါဦးနော။
ပရိသတ်တွေလဲ ဘဝ သီဆိုထားတဲ့ “ဟျောင့် ဒုက္ခပါပဲကွာ” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်ရင် Like & Share လုပ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော။
အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကှို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ ။
Source;Ba wa’s fb
မွငျ့မွတျအတှကျ “​ဟြောငျ့​ ဒုက်ခပါပဲကှာ” ဆိုတဲ့ သီခငျြးလေး ရေးပေးခဲ့တဲ့ ဘဝ
The Voice Myanmar Season 1 မှာ သီဆိုယှဉျပွိုငျရငျး ပရိသတျတှေ သတိထားမိလာခဲ့တဲ့ ဘဝက အခုလကျရှိမှာလဲ သူကိုယျတိုငျ သီခငျြးတှရေေးပွီး သီဆိုနပွေီ ဖွဈပါတယျ။
The Voice Myanmar မှာ ဘဝသီဆိုခဲ့တဲ့ ဖိုးပွညျ့ရဲ့ ကိုယျစောငျ့နတျ သီခငျြးကို Raggae ပုံစံနဲ့ သီဆိုခဲ့တာကလဲ ပရိသတျတှကွေားမှာ တျောတျောကွီး ရပေနျးစားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒီနမှေ့ာ ဘဝက သူအရမျးကွိုကျတဲ့ Idol ဖွဈတဲ့ ရုပျရှငျနဲ့ဗီဒီယို သရုပျဆောငျ မွငျ့မွတျအတှကျ သူကိုယျတိုငျ သီခငျြးလေးတဈပုဒျရေးပွီး သီဆိုပေးခဲ့ပါတယျ။ သီခငျြးလေး နာမညျက “ဟြောငျ့ ဒုက်ခပါပဲကှာ” လို့ အမညျရပါတယျ။
ဘဝက သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာကနေ ကြှနျတျောက ကိုမွငျ့​မွတျ​ရဲ့FAN အစဈ​ ဆိုလညျး လုံးဝ ​နောငျ​ဘဝထိဆိုလညျး မမှားဘူးဗြာ ။သူ သရုပျ​​ဆောငျ​တာ​လေးကွညျ့​ပွီး ​ကွှပွေီး သီခငျြး​ရေးမိခဲ့တယျ​ ကိုမွငျ့​မွတျ​​နရောက​နေ ဝငျ​ပွီး နားသာဆငျ​ကွညျ့​​ပေ​တော့ဗြာ” ဆိုပွာပွောထားပါတယျ။
ဘဝရေးဆိုတီးထားတဲ့ “ဟြောငျ့ ဒုက်ခပါပဲကှာ” ဆိုတဲ့ သီခငျြးလေးကို ခံစားနားဆငျပေးကွပါဦးနျော။
ပရိသတျတှလေဲ ဘဝ သီဆိုထားတဲ့ “ဟြောငျ့ ဒုက်ခပါပဲကှာ” ဆိုတဲ့ သီခငျြးလေးကို ကွိုကျနှဈသကျကွမယျ ထငျပါတယျ။ ဒီသီခငျြးလေးကိုကွိုကျနှဈသကျရငျ Like & Share လုပျဖို့ မမပေ့ါနဲ့နော။
အခြိနျပေးပွီး ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိသတျကွီးကှို ကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါတယျ။ ။
သီလရှင်ဝတ်တုန်းရခဲ့တဲ့ ဆုလေးမို့ တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ နေခြည်ဦး
PrideofMyanmarကပေးတဲ့SocialInfluencerမှာအောင်မြင်သူတစ်ဦးအဖြစ်နေခြည်ဦးကရရှိခဲ့တာပါ။သူသီလရှင်ဝတ်နေတုန်း ရခဲ့တဲ့ ဆုလေးမို့ သူ့အတွက် တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Beauty Blogger တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ နေခြည်ဦးဟာ Pride Of Myanmar က ပေးတဲ့ ဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ နေခြည်ဦးက Social Influencer နယ်ပယ်မှာမျက်မှောက်ခေတ်အလှအပရေးရာတွင်အောင်မြင်နေသောစံပြအမျိုးသမီး၊လူမှုဆက်ဆံရေး မီဒီယာတွင် လူသိများ ထင်ရှားသူ၊ အမျှော်အမြင်ရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုပေးအပ်ပွဲနေ့က နေခြည်ဦးဟာ သီလရှင်ဝတ်နေတာဖြစ်လို့ နေခြည်ဦးအစား သရုပ်ဆောင် မော်ဒယ် ခါရာက ကိုယ်စား တက်ရောက်ယူပေးခဲ့ရပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ(၆)ရက်နေ့ကလူပြန်ထွက်လာတဲ့နေခြည်ဦးကဆုရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရတဲ့ခံစားချက်ကိုအခုမှသူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။“မယ်သီလရှင်ဝတ်တဲ့နေ့လေးမှာရတဲ့ဆုမို့လို့နေခြည့်အတွက်ပိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Pride Of Myanmar Awards ဆက်လျှောက်ရမယ့် ခြေလှမ်းတွေအတွက် တကယ့်အားပါ။ And thanks to everyone who voted me!!! “ ဆိုပြီး ဖေဖော်ဝါရီ (၇) ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ပြော ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ကဏ္ဌအသီးက ထူးချွန်ထက်မြက်သူတွေကို ရွေးချယ်ဆုချီးမြှင့်တဲ့ Pride of Myanmar Awards 2018 ဆုပေးပွဲကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ ညက ပြည်လမ်းနဲ့ စကားဝါလမ်းထောင့်ရှိ Pegu Club မှာ စည်ကားခမ်းနားစွာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။
ဒီပွဲမှာ နေခြည်ဦးနဲ့ အတူစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် ကိုထက်မြတ်ဦး၊ လူထုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကို ဆောင်ရွက်နေသူJoshua ချစ်ထွန်း၊ပန်းချီပညာရှင်ကြီးဦးလွန်းကြွယ်၊ကိုမိုးစက်၊အားကစားသမားအောင်သူ၊ဖက်ရှင်ရေးရာမှာထူးချွန်သူမေမြတ်နိုး၊ဖျော်ဖြေရေးကဏ္ဍအတွက် အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့က ဆုတွေအသီးသီး ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နေခြည်ဦး(Nay Chi Oo) က ဖေဖော်ဝါရီ(၁)ရက်နေ့ကမွေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ်သီလရှင်ဝတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီ(၆) ရက်နေ့မှာ လူပြန်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ သူမရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေပြန်လည်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါတယ်။နေခြည်ဦးကို BeautyBloggerအနေနဲ့ပရိသတ်တွေစတင်အားပေးခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီနောက်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ရန်သူရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကနေတဆင့် အနုပညာလောကထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။CRD-Cele Yatkwat
ကြည့်မိသူတိုင်းရင်ခုန်သွားစေမယ့် ရေကူးကန်ထက်က sexy ကျကျ အကြမ်းစားပုံတွေနဲ့ ညို့ယူဖမ်းစားလိုက်တဲ့ ရွှေအိမ်စည်
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ ရွှေအိမ်စည်ကတော့ အလှမယ်လောကရဲ့ နာမည်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့သည်းသည်းလှုပ်ချစ်ခင်အားပေးမှုတွေနဲ့ အောင်မြင်လာသူဖြစ်ပါတယ်။
သူမကတော့ Miss Golden Land Myanmar 2018 ရဲ့ သရဖူဆုရှင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မော်ဒယ်တစ်ယောက်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေထက် ပိုမိုပြည့်ဝတဲ့ အရည်အသွေးတွေရှိသူဖြစ်ပြီး အလှအပရေးရာမှာလည်း အပြစ်ပြောစရာ မရှိသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
သူမကတော့ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ အနုပညာပုံရိပ်များကို လူမှုကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ဖော်ပြလေ့ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။လတ်တလောမှာလည်း သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အလှပေါ်လွင်စေတဲ့ ရေကူးကန်ထက်က sexy ကျကျ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေကို ဖော်ပြထားတာတွေရပါတယ်။ပုံတွေတိုင်းက တကယ်ကိုဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိနေတာကြောင့် ပရိသတ်တွေ အချစ်ပိုစေမှာ အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်
သူမဟာ ဖက်ရှင်ပိုင်းမှာလည်း အမြဲကိုစမတ်ကျလှပကာ ယုံကြည်မှု အပြည့် ရှိနေသူလေးလည်း ဖြစ်တာကြောင့် မိန်းကလေးအများစု အားကျ ချစ်ခင်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ အလှအပနဲ့ ပညာကလည်း အံ့မခန်းအောင်ပါပဲနော် ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ။ကဲ..ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးတွက် ရွှေအိမ်စည်ရဲ့ အမိုက်စား ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ကြည့်ရူ့နိုင်စေရန် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ရှက်တက် တဲ့ ကောင်းပြည့် ကို အမိ အရ ဖမ်းယူရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့တဲ့ သန္တာဗိုလ်ရဲ့ ကြည်နူးဖွယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေး
ချစ် ပရိသတ်ကြီးရေ…. အနုပညာနယ်ပယ်မှာ အောင်မြင်မှုသရဖူဆွတ်ခူးရရှိထားတဲ့ မော်လ်ဒယ်သရုပ်ဆောင်စုံတွဲလေးဖြစ်တဲ့ ကောင်းပြည့်နဲ့ သန္တဗိုလ်တို့ စုံတွဲလေးကို ပရိသတ်တို့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်။ တကယ့်ကို လိုက်ဖက်ညီလွန်းတာဖြစ်ပြီး အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာ ပရိသတ်ကိုယ်စီရဲ့ အားပေးမှုတွေ တစ်ခဲနက်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အမြဲအတူသွားအတူလာ ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေထိုင်ကြတဲ့ သူတို့နှစ်ဦးဟာ ပရိသတ်တွေအားကျရတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတွေဖြစ်လို့နေပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်မင်းသားကောင်းပြည့် ဟာဆိုရင်လည်း သူရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ချစ်သူလေးဖြစ်တဲ့ မင်းသမီး သန္တာဗိုလ်ကို အမြဲအလိုလိုက်ပြီး အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ဂရုတစိုက်ရှိနေတက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့စုံတွဲလေးဟာမကြာခဏဆိုသလို tik tok video file တွေပြုလုပ်ပြီး ပရိသတ်ကြီး ကြည့်ရှုခံစားရအောင် တင်ဆက်ပြသပေးလေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်ရအောင် လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ facebook ပေါ်တွင် သူမရဲ့ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှု၊ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုအမျိုးမျိုးကို အစဉ်အမြဲဖော်ပြပေးလေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်လည်း ချစ်သူကောင်းပြည့်နဲ့အတူ ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့ TIk tok video file လေးကို “ရိုက်နေတာကိုလိုက်ရှောင်နေတယ် ကွီးကရှက်တာတဲ့” ဆိုတဲ့ status လေးနဲ့အတူ သူမရဲ့ official facebook acc တွင် ဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပြီး Myanmarload ပရိသတ်ကြီးလည်းကြည်ရှုခံစားရအောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ဒေါင်း၊ ပိုင်ဖြိုးသု နဲ့ အိန်ဂျယ်လမုံတို့ ရဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင် အချစ် ကို ကြည့်ရှုရမယ့် “အချစ်ဖြင့်လွမ်းစေ” ဇာတ်လမ်းတွဲ
ပ ရိသတ်တွေ ချစ်ကြ တဲ့ မင်းသားချောလေး ဒေါင်းက အခုချိန်မှာတော့ အောင်မြင်တဲ့ မင်းသားတစ်လက် အဖြစ် ရပ်တည်နေပြီ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါင်းရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကလဲ အရင်ကထက် စိတ်လာပြီး ပရိသတ်တွေကို အမျိုးမျိုးတင်ဆက်ပေးနေတာကိုလဲ တွေ့ရပါတယ်။ ဒေါင်းကို အားပေးလက်ခံကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကလဲ အမြို့မြို့အနယ်နယ်မှာ အခိုင်အမာနဲ့ ရှိကြပြီး ဒေါင်းက အောင်မြင်သူတစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေနိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါင်းရဲ့ အနုပညာလုပ်ရှားမှုတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “အချစ်ဖြင့်လွမ်းစေ” ဇာတ်လမ်းက မကြာခင်မှာပဲ ကမာရွတ်မီဒီယာနှင့် အချစ်ဖြင့်လွမ်းစေ Official Page များမှ ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
“အချစ်ဖြင့်လွမ်းစေ” ဇာတ်လမ်းက စာရေးဆရာမကြီး နုနုရည် အင်းဝ ရဲ့ နာမည်ကြီး ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နှစ် ၁ဝဝ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ပြုရိုက်ကူးထားတာလို့ သိရပါတယ်။ “အချစ်ဖြင့်လွမ်းစေ” ဇာတ်လမ်းကို ဒါရိုက်တာ နေသန်မောင်ကရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဓိကသရုပ်ဆောင်များအနေနဲ့ ဒေါင်း၊ ပိုင်ဖြိုးသု နဲ့ အိန်ဂျယ်လမုန်တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေအတွက် “အချစ်ဖြင့်လွမ်းစေ” ဇာတ်လမ်းမှ ဒေါင်းပြောတဲ့ အမှတ်တရတွေကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
“အချစ်ဖြင့်လွမ်းစေ” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ဒေါင်းကို ပရိသတ်တွေ တွေ့ဖူးနေကျမဟုတ်တဲ့ ပုံစံမျိုးကို တွေ့ရဦးမှာပါ။ “အချစ်ဖြင့်လွမ်းစေ” ဇာတ်လမ်းတွဲက အခု ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း ပြသတော့မှာမို့ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။ အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။